Punta Cana - Ihe ndị dị mkpa ime na ịhụ | Njem Absolut
Ihe ndị dị mkpa ị ga-eme na ịhụ na njem gị na Punta Cana
Ọ baghị uru ikwu, Punta Cana bụ otu n'ime ebe a na-achọkarị. N'ihi na naanị site n'ịkpọ aha ya, anyị na-aghọta na osimiri ndị ahụ bụ paradaịs nke ọtụtụ ndị njem na-achọ, ma ọ bụ eziokwu na na mgbakwunye na-ekpori ndụ n'akụkụ nke anyanwụ, ájá na mmiri turquoise. Njem a na Punta Cana na-eme ka anyị nwee ihe ndị na-adịghị agwụ agwụ anyị ga-eme ma hụ, ị ​​ga-atụ uche ha?
Ikekwe ị nwere echiche ahụ na-enweta ụfọdụ n'ime osimiri na-adọrọ adọrọ, na n'ezie ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'etiti ezumike Punta Cana. Mana ebe ị na-anụ ụtọ ụbọchị ezumike, ị nwere nhọrọ ndị ọzọ ị ga-ahụkwa n'anya. Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị ga-amalite, echegbula, anyị arụla gị ọrụ ahụ. Tupu ịgbanwuo kpamkpam, cheta ịhọrọ a flight plus hotel Punta Cana. Gịnị kpatara? N'ihi na ị ga-aga na nchekwa na nkasi obi nke imechi ihe niile nke ọma ma ọ bụ kechie. Ugbu a ee, nabata ma ọ bụ nabata na ezumike gị!
1 Hazie njem gị na Punta Cana na ngwungwu ezumike na-agụnye
2 Njem nlegharị anya mbụ akwadoro: Ogige Ogige Mba Los Haitises
3 Nleta na Isla Saona
4 Ịgba mmiri na Catalina Island
5 Santo Domingo, nleta omenala kachasị
6 Ihe omume kacha mma ị nwere ike ime na Punta Cana
Hazie njem gị na Punta Cana na ngwungwu ezumike na-agụnye
Nzọụkwụ mbụ iji nwee ike ịnụ ụtọ onwe gị karịa mgbe ọ bụla bụ ịhọrọ ezumike Punta Cana na-agụnye ihe niile. N'ihi na naanị mgbe ahụ ka anyị maara na anyị nwere usoro ụlọ nke gụnyere ọrụ niile. Ya mere, n'ụzọ dị otú a, ị ga-elekwasị anya naanị n'ịnụ ụtọ ihe omume niile na-amasị gị ma hapụ onwe gị ka ị jiri nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu, na-enweghị nchegbu maka ebe ị ga-eri nri ma ọ bụ mgbe. N'ezie, n'ọnọdụ ndị ọzọ Mgbe anyị na-ekwu maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị na Punta Cana, anyị ga-ekwu banyere nkasi obi dị ukwuu nke anyị ga-ahụ na ha. Nke a pụtara na a ga-enwe ụbọchị ị na-ekwesịghị ịpụ, n'ihi na ị ga-ahụ ihe niile ị na-achọ.
N'ezie, mgbe ị na-eme ndoputa ụlọ nkwari akụ, anyị ga-eche echiche banyere nhọrọ ọzọ a na-achọkarị nke na-elekwasị anya na ụgbọ elu gbakwunyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ Punta Cana. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịchọta onyinye ndị a ga-anabata mgbe niile.
Njem nlegharị anya mbụ akwadoro: Ogige Ogige Mba Los Haitises
Anyị echekwalarị maka njem anyị na Punta Cana, yabụ ozugbo anyị rutere ebe ahụ, njem ahụ ga-amalite. Njem njem na-amalite site na otu n'ime ebe mbụ ị ga-eleta. Nke a bụ National Park dị na Bay nke Samaná. Ị ga-anụ ụtọ ebe dịpụrụ adịpụ na ebe ntụrụndụ niile dị na mpaghara ahụ. N'ime ya, ị ga-achọpụta ihe ndị a na-akpọ 'mogotes' nke bụ ụdị elu ma ọ bụ ala dị elu nke e mepụtara site na okike. Ị nwere ike ịbịarute n'oké osimiri wee chọpụta ọgba aghara dị iche iche na ebe dị ka ụlọ ndị a, jupụtara na nzuzo ma mara mma nke ukwuu.
Nleta na Isla Saona
Ọ bụ otu n'ime njem nlegharị anya a na-achọkarị na ihe kpatara ya bụ n'ihi na ọ nwere osimiri mara mma jupụtara na nkwụ, ma ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ha na-ejikọta ya na coral reefs. Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị na Punta Cana etinyere ya na ngwugwu ma ọ bụ oge ntụrụndụ ha kacha akwadoro. N'ebe ahụ ị ga-ahụ Mano Juan, nke bụ obodo ịkụ azụ dị jụụ., nke ga-emeri gị, ekele maka ụlọ ya mara mma na maka ịghọ ebe nsọ nduru.
Ịgba mmiri na Catalina Island
Agwaetiti ọzọ ị nwekwara ike ịga bụ nke a. Akpọrọ ya Catalina n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka Christopher Columbus si kpọọ ya laa azụ na 1494. Ọ bụ ebe ọzọ na-eme njem nlegharị anya na n'ime ya ị nwere ike iburu ya site na ihe omume dịka mmiri mmiri. Ọ na-abụkarị ihe a na-ahụkarị na mpaghara ndị a ma ama. Ya mere, mgbe ịgagharị n'àgwàetiti ahụ, ọ dịghị ihe dị ka ịhọrọ obere mgbatị ahụ. Ị ga-ahụ n'anya na echiche ya jupụtara n'okike.
Santo Domingo, nleta omenala kachasị
Ọ bụrụ na otu ụbọchị ị na-ebili n'isi ụtụtụ ma chọọ ịme njem nleta omenala, ọ dịghị ihe dị ka ịga Santo Domingo. Site na Punta Cana ọ na-eji ụgbọ ala ihe dị ka awa atọ. Ma ọ ga-aba uru, na ọtụtụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime obodo kacha ochie na Caribbean dum. O nwere ebe akụkọ ihe mere eme gbara mgbidi yana ụlọ ndị malitere na narị afọ nke XNUMX. Ọzọkwa na ebe a ị nwere ike ịnụ ụtọ mbụ Katidral na nnukwu ụlọ nke America nwere. Ka a sịkwa ihe mere na ọ bụ saịtị ihe nketa ụwa
Ihe omume kacha mma ị nwere ike ime na Punta Cana
N'akụkụ osimiri ọ bụla, nke kachasị dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ bụghị mgbe niile ka ị na-asa ahụ ma ọ bụ na-asa ahụ. Ya mere ị nwere ike itinye oge n'ime ihe omume pụrụ iche. Anyị kwuru banyere mmiri mmiri mana Anyị anaghị echefu ịgafe ebe aja na quad ma ọ bụ n'ịnyịnya. Kedu ihe ga-amasị gị karịa? Ikekwe inwe ike ịfefe n'ebe ahụ ma ọ bụ mee sọfụ. Obi abụọ adịghị ya, enwere nhọrọ maka onye ọ bụla na-atọ ụtọ. Nzọ na ezumike nrọ ma echegbula onwe gị maka akpa gị n'ihi na ụgbọ elu Punta Cana tinyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike ịgakọta ọnụ, na mkpọ ma chekwaa gị ezigbo ntụtụ. Anyị ga-akwakọba?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ihe ndị dị mkpa ị ga-eme na ịhụ na njem gị na Punta Cana